मुन्दुम पदमार्गको नक्सा सार्वजनिक- समाचार - कान्तिपुर समाचार
मुन्दुम पदमार्गको नक्सा सार्वजनिक
असार २८, २०७५ विद्या राई
काठमाडौँ — पूर्वी पहाडको पर्यटन प्रवर्द्धन तथा विकासमा नयाँ उचाइ थपिएको छ – मुन्दुम पदमार्ग । उक्त पदर्माग पर्यटकीय सम्भावना बोकेको भोजपुर र खोटाङ जिल्लाको टेम्केडाँडा देखि हाँसपोखरी–मैयुङहुदै साल्पा–सिलिचुङसम्म पुग्छ ।
बिहीबार नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यालयमा पदमार्गको औपचारिक विमोचन गरिएको छ। भोजपुरबाट निर्वाचित सांसद सुदन किरातीले पदमार्गको म्याप सार्वजानिक गर्दै विमोचन गरे।
टेम्केमैयुङ–साल्पा सिलिचुङ पर्यटन प्रवर्द्धन समिति र हिमालय म्याप हाउसले तयार पारेको पदमार्गको ट्रेकिङ एजेन्सी (टान), नेपाल पर्यटन बोर्ड, पर्यटन व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा सार्वजानिक गरिएको थियो। पदमार्ग र पदमार्गका दृश्य, त्यहाँबाट अवलोकन गर्न सकिने दृश्यहरु, स्थानीय उत्पादन, संस्कार, संस्कृति समेटिएको वृत्तचित्र र तस्बिरहरुको प्रदर्शन गरिएको थियो। यसैगरी ‘गाइडम्याप’ वितरण गरिएको थियो।
कार्यक्रममा बोल्दै सांसद राईले पदर्मागको प्रवर्द्धनका लागि आर्थिक सहयोगका लागि सरकारसंग माग राख्ने बताए। पदमार्ग ल्याउने समितिको सह्रयानीय कार्य बताउदै पदमार्गको सफल सञ्चालनका लागि देश विदेशमा प्रचारप्रसार संगै स्थानीय तहमा चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताए। ‘विदेशी ल्याउन सक्नुले मात्रै पर्यटनको विकास हुन सक्दैन, आन्तरिक तथा स्थानीय प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने।
प्रवद्र्धन समितिले गएको पुस महिनामा १३ दिनको प्याकेज बनाएर भोजपुर पुगी स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। ‘हामीले पदमार्ग पहिचान गर्ने, म्यापिङ, मार्किङ गर्ने पानीका स्रोत, आवास, होटल, सुरक्षालगायतको अध्ययन गरेका थियौ,’ समितिका अध्यक्ष रमेश राईले भने, ‘त्यही अध्ययन अनुसार गाइडलाइन तयार गरेर पर्यटन व्यवसायी र पर्यटकहरुमाझ सार्वजानिक गरेका छौं।’
पर्यटन क्षेत्रमा पछिल्लो समय थपिएको नयाँ पदमार्गबारे वेभसाइट पनि आइसकेको उनले बताए। किरात राई समुदायको बाहुल्य रहेको भोजपुर र खोटाङका राई समुदायको संस्कार तथा संस्कृति, भेषभुषा, खानाको प्रवर्द्धन र प्रचारप्रसारलाई पदमार्गमा जोडिएको छ।
पदमार्गमा अवलोकन गर्न सकिने जैविक विविधता र हिमशृङखलाहरुलाई मुख्य आकर्षणका रुपमा लिइएको छ। पदमार्ग टेम्केबाटै सुरु हुन्छ। यसको उचाइ समुन्द्री सतहदेखि दुई हजार नौ सय ९५ मिटर छ। हाँसपोखरी–मैयुङक्षेत्र ३ हजार ३ सय ३३ मिटर उचाइमा पर्छ भने साल्पासिलिचुङ क्षेत्र चार हजार दुई सय मिटर उचाइमा पर्छन्।
१८ वर्षदेखि पर्यटक पथप्रदर्शकको काम गर्दै आएका इन्सु राईका अनुसार आठ हजार मिटर माथिका मकालु, ल्होत्से, कञ्चनजंघा, सगरमाथा, ल्होत्सेसार र चोयु गरी ६ वटा हिमालहरु हेर्न सकिन्छ। यसैगरी दोर्जेलाक्पा, गौरीशंकर, नुम्बुर, कर्रियालुङ, क्वाङ्दे, टेंगिरे गिटौ, पिकफेर गोसार, चोयु, एकलखे, कुसुम कंगारु, थामसेर्कु, खाङतेगा, क्यासेर हिमाल अर्थात चारपाटे, म्यारापिक, नुप्से, सगरमाथा, ल्होत्से, ल्होत्से सार, पिक ३८, चाम्लाङ, मकालु, कञ्चनजंघा, कुम्भकर्ण, जन्नु लगायत दुईदर्जन बढि हिमशृङखलाहरुको दृश्यवलोकन गर्न सकिन्छ।
हिमाल नचढ्ने तर सकेसम्म नजिकै र एकैठाउाबाट हेर्न चाहने विदेशी पर्यटकका लागि पदमार्ग उत्कृष्ट गन्तव्य भित्र पर्छ। पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सके अन्नपुर्णक्षेत्रको दृश्यवालोकन गर्न सकिने ‘पुनहिल भ्युपोइन्ट’को विकल्प हुनसक्ने उनले बताए। यहाबाट तिब्बत, भारतका दार्जीलिङ्ग, कालेपोङ्ग, सिलिगुढी शहरहरु, भुटान, पुर्वी नेपालका १६ वटै जिल्लाहरु प्रष्ट देख्न सकिन्छ। मौसम खुल्ला भएको बेला सुर्योदय, सुर्यास्त, हिमशृङखलाहरु, डााडाकाडााहरु प्रष्ट देखिन्छन्।
पुर्वको कञ्चनजंघा रेन्जदेखि पश्चिमका रेन्जहरु एक सय ८० डिग्रिको रेन्जमा हेर्न सकिन्छन्। र यस्ता डााडाहरु विरलै मात्र पाइन्छन्। पछिल्लो सयम ‘टप टेन’ भित्र पर्ने नेपालका पर्यटकिय गन्तव्यहरु भौतिक संरचना विस्तार तथा निक्कै पुराना भैसकेकाले विदेशीहरुले आफ्ना यात्राहरु छोट्याइरहेका छन्। मुन्दुम पदमार्ग ‘फ्रेस भ्यु पोइन्ट’का रुपमा सम्भावना बोकेको छ।
देशभर झण्डै ३ सय बढि ट्रेकिङ एजेन्सी तथा १८ हजारबढी पर्यटक पथप्रदर्शक छन्। पर्यटनमा सरोकारवाला सबै व्यक्तितथा क्षेत्रहरुसंग समन्वय तथा सहकार्य गरी विदेशी पर्यटक भित्राउने तथा स्थानीय स्तरमा अर्थतन्त्र मजबुत पार्ने मुख्य लक्ष्य रहेको समितिका सचिव श्याम सामसोङ बताउछन्। ‘चारवटै सिजनमा पदमार्गमा घुमफिर गर्न सकिन्छ, सिजनअनुसारको दृश्यावलोकन तथा स्थानीय उत्पादनको स्वाद लिन सकिन्छ, प्रचुर आनन्द लिन सकिन्छ,’ उनले भने। भोजपुरमा तोङ्बा, लाङ्सा र लोकल कुखुराको तिते खानेकुरामा बिशेष मेनु मानिन्छन्। बढि अर्डर हुने र बिक्रि हुने खानेकुरा भित्र पर्ने होटल व्यवसायी बताउछन्।
मुन्दुम पदमार्ग नै किन?
खोटाङ र भोजपुरलाई राणाकालमा क्रमश: पुर्व ३ र ४ नं क्षेत्र भनेर चिनिथ्यो। जहाा ५० प्रतिशत बढि किरात राई समुदायको बसोबास छ। डााडाकाडा, खोलानाला, प्राकृतिक तथा साास्कृतिक सम्पदाहरु उनीहरुका मिथकसंग जोडिएका हुनाले मुन्दुम पदमार्गका रुपमा ब्रान्डिङ गरिएको अध्यक्ष राइ बताउछन्। मुन्दुमलाई किरातहरुको अलिखित धार्मिक ग्रन्थ मानिन्छ। उहिले पुर्खाकालदेृखि नै टेम्केदेखि, मैयुङ हुदै साल्पासिलिचुङलाई पुकार्दै आएको र अहिले पनि उहि मान्यता किरात राइ समुदायमा जिवन्त रहेकाले मुन्दुम पदमार्ग नामाकरण गरिएको बताए।
टेम्केडााडा–मेरुङ–धोद्रे–जलजले–मातिमडााडा–हाासपोखरी–मैयुङडााडा–सातदोबाटो–ह्याकुलेडााडा–लौरेडााडा–चिलिमधाप–माने–साल्पापोखरी हुदै सिलिचुङसम्मको रुटलाई मुन्दुम पदमार्ग भनिएको छ। यस रुटका लागि तत्काल तीन वटा नाकाहरु सार्वजानिक गरिएका छन्। तीनलाई इन्टरनेटको पहुाचमा राखिएको छ। काठमाडौ हुदै जानेका लागि खोटाङको हलेसी–दिक्तेल–चखेवा–टेम्के–मैयुङ हुदै सिलिचुङमा टुगिन्छ। काठमाडौदेखि चखेवासम्मको दुरी करिब दुईसय किलोमिटर पर्छ। पदमार्गको अवलोकन पछि पर्यटकले चारवटा विकल्प रोज्न सक्छन्।
पहिलो एडमण्ड हिलारी पदमार्ग हुदै सगरमाथा बेसक्याम्प जाने, दोस्रो मकालु बेसक्याम्प जाने, तेस्रो अरुण भ्याली ट्रेक जाने र चौथो मैयुङ–बागखोर–सुन्तले हुदै भोजपुर सदरमुकाम फर्कने। अर्का दुईवटा नाका सदरमुकाम र उत्तरी षडानन्द नगरपालिकाको दिंलाबजार हुदै सुरु हुन्छन्। उत्तरी भेगमा छिमेकी संखुवासभाको तुम्लिङटार हुदै आउने पर्यटकका लागि तथा भोजपुर सदरमुकाम टक्सार विमानस्थल र धरान–धनकुटा हुदै बसगाडीबाट आउने पर्यटकका लागि।
प्रकाशित : असार २८, २०७५ १९:४३
सरकारको निर्णय विरुद्ध अन्तरिम आदेश
काठमाडौँ — शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको राजनीतिक नियुक्ति उल्टाउने क्रममा पदमुक्त भएका दुई पदाधिकारीहरुलाई यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले निक्षेप कर्जा सुरक्षा कोषका प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुबाबु मिश्र र दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झालाई तत्काल पदबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले मिश्रको निवेदनमा साउन २ र झाको निवेदनमा साउन ३ गते छलफलका लागि बोलाउने आदेश गर्दै त्यतिञ्जेलका लागि निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय : भदौ १४ पछिका सबै राजनीतिक नियुक्ति बदर
प्रकाशित : असार २८, २०७५ १९:१८
डीएसपी राई धरौटीमा रिहा
इजरायलका राजदूत थापा फिर्ता बोलाइए
विश्वका शिक्षा अभियन्ता काठमाडौंमा
नक्सा पासै नगरी त्रिविले बनायो दर्जन ठूला भवन
युनेस्को एटलसमा नेपालका भाषा
मधेसया स्या: न्या:म्ह पासा
चन्द्रकिशोर कार्तिक २९, २०७५
मधेसका सुखदु:खका भरपर्दा साथी थिए, पद्मरत्न तुलाधर । नेपाल भाषामा यसलाई ‘मधेसया स्या: न्या:म्ह पासा’ भन्न सकिन्छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि खुलापनको अभ्यास बढ्दै जाँदा जब केही...
सयपत्री माला किन मिल्काउनु ?
नारायण घिमिरे कार्तिक २९, २०७५
नेपाली समाजमा चलनचल्तीका शब्द ‘सफा’ र ‘पवित्र’ बीचको भिन्नता बुझ्न मलाई झन्डै ३ दशक लाग्यो । मेरो बुझाइमा ‘सफा’ भनेको एउटा अवस्था हो, कुनै कार्य गरी...
दलालसंग अमेरिका आउन चाहनेका नाममा
नवीन रायमाझी कार्तिक २८, २०७५
काठमाडौँको ठमेलमा रहेको र हिमाली जिल्लाको नाम भएको ट्राभल एजेन्सीबाट हाल दक्षिण अमेरिकी देश एल साल्भाडोर र होण्डुरसको नागरिकता बनाई दिने र त्यसपछि अमेरिका सजिलै...
डलर सटही कटनी
सम्पादकीय कार्तिक २८, २०७५
नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्ना नागरिक विदेश जाँदा दिँदै आएको डलर सटही दर घटाएको छ । अब एकजनाले एकपल्टमा जम्मा पन्ध्र सय अमेरिकी डलर साट्न पाउँछ । पहिला...
उमेशप्रसाद मैनाली कार्तिक २८, २०७५
जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्था किन नहोस्, यसका लाभ आफै वितरण हुँदैनन् । जतिसुकै राम्रा कानुन बनुन्, यी त्यसै लागु हुँदैनन् । यसका लागि राज्यको वितरण संयन्त्र चाहिन्छ ।